Serivisy sy mpamatsy ultherapy tsara indrindra | Hongyu
Ultherapyiste ihany no fomba nodiovin'ny FDA, tsy manafika izay manainga ny hatoka, ny saokom-bolo ary ny volomaso, ary manatsara ny tsipika sy ny ketrona eo amin'ny tratrany ambony. Amin'ny alàlan'ny sary ultrasound miaraka amin'i Ultherapy, ny angovo dia aterina tsara any amin'ny toerana hahasoa anao indrindra- ho an'ny valiny hita voajanahary izay
manatsara ny fotoana.1-3
Ny Ultherapy dia miankina amin'ny fitsaboana ultrasound mba hiditra lalindalina kokoa noho ny fitsaboana hafa tsy manafika amin'ny fanentanana collagen. Ary azo ampiasaina
sary ultrasound nentim-paharazana mba ahafahan'ny mpamatsy Ultherapy mahita ny sosona ny tavy tsaboin'izy ireo. Izany dia miantoka ny fitsaboana
ny angovo dia atolotra amin'ny toerana mahasoa anao indrindra, 1,2,4
Ho an'ireo izay tsy vonona ny hiatrika endrika, ny fitsaboana Ul dia manome fahombiazana ho fitsaboana tokana ho an'ny ankamaroan'ny marary, misy valiny. Ianaro ny fomba tsy hanokafana fandidiana, tsy misy fiatraikany amin'ny hoditry ny hoditra, tsy mijanona hitsaboana ny hoditrao malalaka
Ny Ultherapy dia mampiasa ultrasound microfocused mba hiteraka vokatra mafana eo ambanin'ny hoditra. Ity vokany ity dia manomboka ny fizotran'ny vatanao hamorona vaovao sy vaovao
Amin'ny maha proteinina voajanahary azy, ny collagen dia miasa mba hanomezana ny fahatanorana ny hoditra amin'ny fitazonana azy mafy orina sy tonony. Rehefa simba ny agecollagen, ary ny vokany dia ny fahaverezan'ny herin'ny hoditra ary
elastity2Eto no misy ny Ultherapy hidina sy miakatra, amin'ny alàlan'ny fitsaboana ultrasound12
TSY MISY fandidiana eto
Tsy toy ny laser, ny fahita matetika amin'ny radio, ny fandidiana ary ny teknolojia hafa, ny Ultherapy nonsurgical dia mandalo ny hoditry ny
angovo ultrasound miaraka amin'ny sary mifantoka-hametrahana ny habetsaky ny havanana havanana
lalina sy ny mari-pana mety. Ny vokatra dia ny fiandohana amin'ny famokarana collagen ny vatanao1.3-5
Ny valiny voaporofo ny Ultherapy dia mazava,
niseho nandritra ny roa ka hatramin'ny telo volana satria miasa ny collagen vaovao hampiakarana ny hoditra amin'ny vozona, saokany ary ny volomaso ary koa ny hoditra malama amin'ny tratra ambony. Ny vokatra dia mety hihatsara mandritra ny telo ka hatramin'ny enim-bolana manaraka, ary mety haharitra herintaona na mihoatra * Tsy hamerina ny valin'ny fiasan'ny tarehy amin'ny fandidiana izany, fa Ultherapy isa
safidy tsy voatafika voaporofo ara-pitsaboana ho an'ireo mbola tsy vonona amin'ny fandidiana.1.67
* Mety tsy mitovy ny valiny.
Ny ultherapy dia tsy misy raha tsy amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana
Teo aloha: VIVIVE
Amidio ny fitaovanao